किन भएन सक्रिय मनसुन ? - Nature Khabar Complete Nature News
किन भएन सक्रिय मनसुन ?
असार ०६, २०७४
मनसुन पुर्वबाट पश्चिमतिर फैलदा उपत्यकामा कमजोर वर्षा भएकाे छ । सामान्यतया हल्का वर्षा भएपनि अहिले नै ठुलो वर्षा हुने संकेत नदेखिएको मौसमविद्हरुले जानकारी दिएका छन् ।
मनसुन भित्रिएको एकसाता वितिसक्दा पनि सक्रिय वर्षा हुन सकेको छैन । नेपालमा एकसाता अघि पुर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिएको थियो । सुरुवातमै कमजोर रुपमा भित्रिएको मनसुन सातादिन वित्दा पनि सक्रिय हुन नसक्दा वर्षा हुन नसकेको जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मनसुनी वायु नेपालभर फैलन सकेको छैन, महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलले भने, ‘नेपाल प्रवेश गर्दा नै कमजोर रुपमा प्रवेश गरेको मनसुन एकसाता सम्म पुर्वी भुभागमा मात्र सक्रिय रह्यो । यो विस्तारै फैलने क्रममा छ ।’ सामान्यतया पुर्वी नेपालबाट भित्रिएको मनसुन एकसातासम्म पश्चिम नेपालसम्म पुगिसक्थ्यो । उनले भने, ‘मनसुनी वायु सोमबारसम्ममा मध्य भागसम्म फैलिएको छ, पश्चिमसम्म पुग्न अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।’
नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव अझै रहेकोले मनसुनी वर्षा हुन नसकेको मौसमविद् पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार अहिले मनसुन सक्रिय हुन नसक्नुको मुख्य कारण पश्चिमीवायुलाई पुर्वी मनसुनी वायुले विस्थापित गर्न नसक्नु नै हो ।
नेपालमा चार किसिमका मौसमी प्रणाली सक्रिय हुन्छन्, जसमा बंगालको खाडीबाट मनुसुनी वायु आउनुअघिको प्रि– मनुसन, मनसुन, पोस्ट मनुसन र हिउँदमा पश्चिमी वायुको प्रभावले हुने वर्षा रहेका छन् ।
असारको पहिलोसाता वितिसक्दा पनि पानी नपरेपछि किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि पानी नपरेपछि किसानहरुले रोपाई गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष प्रिमनसुनको अवधिमा राम्रो वर्षा भएको थियो । प्रिमनसुनी अवस्थालाई हेरेर यस अघिनै मौसमविद्हरुले राम्रो मनसुनको प्रक्षेपण गरेका थिए । मौसमविद् पौडेलले भने, 'प्रिमनसुनी अवधिमा भएको वर्षाले मनसुनलाई असर पारेको होइन । प्रिमनसुन र मनसुनमा छुट्टा छुट्टै प्रणालीले वर्षा हुने गर्दछ ।'
नेपालमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिलाई मनसुनी अवधि मानिन्छ । यो मनसुनी अवधिमा ८० प्रतिशत वर्षा हुने गर्छ ।